खानेपानी मुहान मर्दीखोलामा सफाइ - Samachar PatiSamachar Pati
खानेपानी मुहान मर्दीखोलामा सफाइ
पोखरा, ६ माघ । पोखरामा जारी बृहत सफाइ अभियान महानगरका मुख्य सहरी क्षेत्रमा वितरित खानेपानी मुहानको माछापुच्छे« गाउँपालिका वडा न. ८ र ५ जोड्ने रिभान पुलसँगै मर्दीखोलामा सम्पन्न भएको छ।
हप्तामा एक घण्टा राष्ट्रका लागि स्वयंसेवा भन्ने उद्घोषका साथ संचालित ८६ औं श्रृंखलाको अभियानमा झण्डै २७ बोरा फोहरमैला संकलन गरिएको नागरिक समाज पोखराका अगुवा शशी तुलाचनले बताएकी छन् ।
यसअघि, माछापुच्छे« गाउँपालिका वडा न. ९का वडा अध्यक्ष दुर्गाबहादुर क्षत्रीले राष्ट्रिय गान बजाएका थिएभने वडा न. ८ का वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दवाडीले उपस्थित सहभागीलाई सरसफाइ र राष्ट्रिय भावनाको शपथ गराएका थिए ।
यसपटकको सफाइ अभियानलाई वडा प्रहरी कार्यालय बगर, जिल्ला समन्वय समिति कास्की, क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालय, नेपाल खानेपानी संस्थान, मुक्तिनाथ विकास बैंक, ओम डेभलपमेन्ट बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, माछापुच्छे« महिला क्लब पोखरा ७, अभियान क्लब महिला उपसमिति, विभिन्न क्षेत्रका सामाजिक अभियन्ता, स्थानीय वडाबासी लगायतले ऐक्यबद्धता जनाएको संयोजक रामबहादुर पौडेलले जानकारी दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय ओलोम्पिक दिवशमा बिबिध खेलकुद गतिविधी
मातृका यादवले कर छल्ने उद्योगी र व्यवसायीहरुलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी